Denmark inoda kugadzira mishonga yemakwenzi kubvisa-chikafu chikafu - Potato System Magazine
Bioengineers kubva kuDanish Institute of Technology vatangisa chirongwa chitsva cheSinProPack chekupa iyo nyika zvigadzirwa zvinogadziriswa zvinotora. Mukufunga kwavo, nyowani yakasununguka inoenderana nezvinhu yakagadzirwa nehuswa tambo inogona kuve imwe nzira ine hutano kune epurasitiki.
Kutanga, mapuroteni anozotorwa kubva muhuswa, kusanganisira clover, ndokutumirwa kuzvipfuyo zvekudya. Iyo yakasara, yakafuma mune fiber, inosvuurwa, yakapwanyika uye yakamanikidzwa. Iyo inoguma yemakwenzi cellulose inozoshandiswa kugadzira kupakata kwechikafu nezvinwiwa.
Zvinozivikanwa kuti Denmark gore rega rega inoshandisa anopfuura zviuru gumi zvematani ekurongedza. Kana iwe ukatsiva ne biodegradable, inozodzora emissions ne10% kana 5 zviuru zviuru zvematani eEC.2 mugore.
Tags: biodegradable kavhaDenmark
Chinyorwa chazvino chemagazini ye "Potato System" chaburitswa